ဘုန်းကျော်: လီးပဲ နအဖကော အတိုက်အခံကော
လီးပဲ နအဖကော အတိုက်အခံကော
မူးနေတုန်း ဒီစာကိုရေးတယ်။ မူးလို့ ဒီကောင့်ကို အရှုးလို့ သတ်မှတ်ချင်ရင် သတ်မှတ်။ ကျနော်တော့ စောက်ဂရုမစိုက်။ ဒါက ကျနော် စိတ်။
အခုရေးမှာက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု့ အကြောင်း။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂-နှစ်လောက်က ကျနော့်ကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ ကနေဒါ ဆရာမက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးတယ်။ ဟေ့...ဘုန်းကျော် Could you tell me about Sanction? သူမေးတာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ ကို ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့။ ကျနော်က ပြန်ပြောတယ်။ ပေါက်ကရ။ ကိုယ်လဲ အတိအကျမသိဘူး။ အခု အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ သိတာကို ရှယ်ပေးရအုံးမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတို့မှာ ငတ်စရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။ နေရာရှိတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကြိုက်သလို ထမင်းကို ရှာစားလို့ရတယ်။ ဒါက အစိုးရအပိုင်း။
ကျနော့်ကို ၈၈-မျိုးဆက်တစ်ဦးကပြောတယ်။ ဘုန်းကျော်...မင်းစဉ်းစားကြည့်...ရန်ကုန်မှာ စက်ရုံတွေ ပြန်ရုပ်တော့ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်းတို့ မလေးရှားကို ရောက်ကုန်တယ်။ ဖာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒီစော်လေးတွေက အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ။ အနဲဆုံး လက်ဖွဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လို့ရတဲ့ လူတွေ။ အခုတော့ ပေါချောင်ကောင်း အရည်မရ အဖတ်မရ ဖင်ခံကြရတယ်။ စက်ရုံတွေသာ ရှိကြည့်...သူတို့ ထိုင်းမှာ လာပြီး ထိုင်းရဲတွေရဲ့ မယားငယ်လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ သူကပြောတယ်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထိလား မထိလားကြည့်။ နအဖက ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီးပြောတာပါ။ မထိလို့ ဦးသန်းရွှေသမီး တင့်တောင်းတင့်တယ် မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်။ ဦးတေဇ ထောတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ဟာ ပတ်ပြီး ဖာ ချလို့ရတယ်။ ဒါလား စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု့ က နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေကို ထိတဲ့အရာလား။
နောက်ဆုံး စက်ရုံမအလုပ်ရုံတွေ ထွက်တော့...ဒါတွေကို မှီခိုပြီး အသက်ရှင်ရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေဟာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ဖာ တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားမှာ ရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေကိုသွားပြီးမေးကြည့်။ သူတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်မှ မကောင်းတာလို့ဖြေလိမ့်မယ်။ ဒါလား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ က နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကံဆိုးစေတာလား။
နိုင်ငံရေးသမားကြောင်တောင်တောင်တွေ သတိထားရမှာက ဗိုလ်ချုပ်တွေက အလကားနေ ချမ်းသာပြီးသားပဲ။ အဓိက ခံရတာက ကျနော်တို့ပဲ။
ဆိုတော့ တစ်ခုပဲလုပ်စရာရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ ကို ပြန်ဖွင့်အောင် လုပ်ပေးပါလို့ မပြောချင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ဖွင့်ပေးတိုင်း နိုင်ငံခြားက လုပ်ချင်မှ လုပ်မှာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးပါ။
အဓိက လူတွေဝိုင်းပြီး အာမှ နိုင်ငံခြားကလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်လိမ့်မယ်။ လက်ရှိ နအဖရဲ့ လမ်းစဉ်ကိုလည်း ကျနော်မကြိုက်ဘူး။ အတိုက်အခံရဲ့ လမ်းစဉ်ကို ကျနော် အားမရဘူး။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်က စောက်တလွဲ တွေးတာကို လျှော့သင့်ပြီ။
ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုလုပ်တယ်ဆိုတာ နအဖကိုထိစေတယ်ပေါ့။ ဒါကိုနိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတွေလုပ်ကြတယ်။ ထောင်ထဲမှာ လက်ရှိ ငပိနဲ့မြိုနေရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့က အစ ဒီအတိုင်းပဲရှိနေတယ်။
ပြည်ပက သူများရောင်ရင် လျှောက်ပြီး ရောင်တဲ့ လူတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ တွေးကြည့်ကြပါအုံး။
နံရံလေးဘက်ကြားမှာ အနေကြာတဲ့လူတွေဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပြင်က လူတွေကို ဗဟုသုတရှိအုံးမှာလဲ။ ဂျီးတော့တောင် ဂျိုနဲ့လားလို့ မေးရတဲ့ လူတွေဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ကို နှိမ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာကို ဒီအတိုင်းပဲ ယူဆဖို့ ပြောနေတာဖြစ်တယ်။
နအဖက လည်းသိတဲ့အတိုင်း။ စောက်ရှုးတွေ။ သူတို့လုပ်ရင် အကုန်လုံးဖြစ်တယ်။ လက်ရှိမှာ အာဏာရှိတော့ စောက်ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်။ သူတို့ကို ထိမှ ဘယ်သူတွေ ဘယ်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စောက်ရှက်မရှိပြောတယ်။ ဦးအောင်လင်းထွတ်ကို နမှုနာကြည့်။ ဦးတင်ဦးကို အတုယူ။ အဓိက ခံ/ရတာက ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေပဲ။ ဒါကို ဒေါ်စုလည်း သိတယ်။ ဦးသိန်းစိန်လည်းသိတယ်။ ဦးသန်းရွှေလည်း သိတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး စာမတက်တဲ့ ကျနော့်အဖေ တပ်ကြပ်ကြီးတောင် သိတယ်။
ငါးလိုမသားများ နအဖေကော၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကော၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေကော၊ တိုင်းရင်းသားလက်နိုင်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကော.... လီးပဲလို့ပေါ်တင်ဆဲမယ်။ မင်းတို့ စောက်တလွဲလုပ်လို့ ငါတို့တိုင်းပြည် ငတ်ရတာ။
အေး...ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးပြီး လီးမကြီးတဲ့လူကြီးကော စောက်ဖုတ်မကြီးတဲ့ ဟိုဟာတွေကို ပြောမယ်။ ဖြေရှင်းချင်ရင် လွယ်လွယ်ပေးပဲ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ။ မုန့် ဟင်းခါး ချက်တာတောင် သူ့ထက်ပိုခက်သေးတယ်။
လီးပဲ..ငါလိုးမသား မြန်မာတွေ။ ဗမာတွေ။ ဆက်ပြီး လုပ်ကြ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, June 21, 2011
ငါလိုးမသားချီးပေ...နောက်တခါ နယ်စပ်လာရင် ခေါင်းဖြတ်ပြီး ခွေးကျွေးပစ်မယ်။ မအေလိုးလေး ထမင်းဝတော့ လီးတောင်တယ်ပေါ့။
မင်းက်မဲဆောက် တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့လို့ပဲ.. မင်းမစော်ကားနဲ့အားလုံးကို.... မင်းကိုယ်တိုင် ဘာတွေများအနစ်နာခံခဲ့လိုလဲ.. နိုင်ငံအတွက်ထား..မင်းပါတီအတွက် ဝေးလွန်တယ်.. မင်းနယ်စပ်က အမြန်ထွက်တာ မင်းကံကောင်းတာပေ့ါ...
ငါကြည့်တယ်..မင်းဘယ်သူ့ကိုမှ အကောင်းမပြောဘူး... ဝေဖန်တာလဲမဟုတ်ဘူး..တမင်းဂွတိုက်တယ်....မရိုင်းစိုင်းတယ်.. မင်းရဲ့ ပါတီကြီးက သင်ပေးလိုက်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး..။ မင်းလိုစိတ်ဓါတ်ကတော့ သြချတယ်..
ကြုံခဲ့ရင် မင်းခေါင်းကိုရိုတ်ချင်တယ်။ ငါ..လက်သီချင်ထိုးလဲရတယ်.. ကြိုးချည်ပြီ ဆွဲလဲရတယ်..
ငါလိုးမသား.. တိတ်တိတ်နေ...စာလေ မတောက်တခေါက်နဲ့.. လေမကျယ်နဲ့
ဟာဟ ကိုဘုန်းကျော်အမှန်ကိုပြောနေတာဘဲ ခုထက်ထိ
သတောင်းစား...မင်း မဲဆောက်မှာ ဘယ်လိုနေခဲ့လဲ ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်...မင်းခုမှကြောင်တောင်တောင် လာမလုပ်နဲ့..ဇရှိရင်ပြန်လာခဲ့ ...ခေါင်းတစ်ခြား ကိုယ်တစ်ခြားဖြစ်သွားမယ်..မအေလိုး
I like ur article about sanctiOn & agree !!!!!!!!!.Yes , it is absolutely right .For example, i went to SG to work becasue there are no more chance to find good job and SG has more jobs as they have foreign investment company so, most Myanmar talents pump in to SG by alternative way .SG & other neighbouring ASEA countries gain upon our country's sanction .Some ppl got interests upon sanction but it hit to ordinary Myanmars , it is including from top to bottom line .But oppositions and Junta are very good life with or without sanction .But there is no sanction , the oppositions don't have anything to do ...har ha...:P
that article is half truth because of some economic-refugee are now resettlement in third countries,who came to Maesot they always search call girls;Burmese ladies,and fuck the whole night that is nearly like rape cases to Burmese people.I,therefore,would like to recommend Phone Kyaw article is half truth.
ဘယ်တော့မှ နယ်စပ်ကို လာမှာ မဟုတ်ဘူးကွ...နယ်စပ်တစ်ခုတည်း လည်စရာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကို ကိုယ်ရှောင်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ မင်းတို့လည်း သြစတျေးလျရောက်ရင် ငါ့ဆီလာလည်ကြပါ။ မင်းတို့ကို ပတ်ပတ်နှပ်နှပ်ဝေဖန်လို့ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ငါ့ရေးတဲ့စာတွေကို လာမဖတ်ကြနဲ့။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အမြင်တူချင်မှ တူမှာပေါ့။ ယဉ်ကျေးချင်မှ ယဉ်ကျေးမှပေါ့။ ဆဲတာကို မကြိုက်ရင် အဆဲမခံရနိုင်အောင်နေရတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု့ ကို လုပ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးက ထမင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အများစု။ အခု ခံရတာက ငါတို့လို့ နိုင်ငံခြားကကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့အမျိုးတွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကွ။ NLD ကိုကြည့်...ဒီလူတွေထဲမှာလည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကြောင့် ခံရတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်။ ကိုယ်မှားတာကို မျက်စိပိတ်ပြီး ငြင်းနေတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ မင်းသားမလုပ်ရလို့ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်ကြ သလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ သတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေ သတိထားဖို့က မင်းတို့ သတ္တိရှိရင် ငါ့လိုနာမည်တပ်ပြီးရေး။ မင်းတို့ပဲ အရင်သေမလား ငါပဲ သေမလားဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ တချို့ လူတွေက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင် သိတ်ပြီး နားဝင်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ရွယ်တူချင်းဆဲရင် လည်း သိတ်ပြီး နာတာမဟုတ်ဘူး။ ငယ်တဲ့သူက ကြီးတဲ့သူကို ဆဲပြီးဆိုရင် အရမ်းနာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆဲ နေတာပဲ။ ငယ်လည်း ဗုဒဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ ငရဲကြီးမှာတော့ကြောက်တယ်။ အပြင်မှာ ဘယ်တော့မှကြီးတဲ့လူကို မဆဲခဲ့ဘူး။ သူထိုးရင်တောင်ခံခဲ့တယ်။ ပြန်မလုပ်ဘူး။ ဒီလောက်ယဉ်ကျေးတဲ့လူပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တိုင်းပြည်ကို အဓိက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေကိုတော့ ဆဲသင့်ရင်ဆဲရတယ်။ ထိုးသင့်ရင်ထိုးရတယ်။ ၈၈၈၈ မေးဂရုက ထုတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့လူတွေထဲမှာ လူ့ဘောင်သစ်က အတွင်းရေးမှု ခင်မောင်တင့်ဆိုတဲ့ ကွန်မြူနစ်တစ်ကောင်ပါတယ်။ ဒီကောင်က ကျော်စွာမော်လုပ်လိုက်။ တူမောင်ညိုလုပ်လိုက်။ တချိန်လုံး ကိုယ့်နာမည်တောင်ကိုယ် မဖော်ရဲဘူး။ ဒါလားနိုင်ငံရေးသမား။ ဒီလို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လူတွေများနေလို့ တိုင်းပြည်က ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲ။ အခု ဘုန်းကျော်ဆဲတာကို အတော်နာကြတယ်။ ကျနော်လေးစားရတဲ့ ကိုအောင်သူငြိမ်းတောင် ကျနော့်ကို ပြန်ပြီ ဆဲပြီ။ ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့။ ပေါ်တင် ပါးစပ်နဲ့ ချတာ ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘူး။ လက်နဲ့ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်။ မနက်ဖန်အလုပ်သွားမယ်။ တစ်ပတ်တိတိ စာမရေးနိုင်ပါ။ မဆဲနိုင်ပါ။ အားလုံးနားလည်ဖို့က လူမိုက်သိတ်ပြီးမလုပ်ချင်ပါနဲ့။ အုပ်စုနဲ့ ဂန်မကျယ်ပါနဲ့။ ဒါက လူပေါတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါက နိုင်ငံရေးသမားလို့ ငါ့ကိုငါ ဘယ်တော့မှ မပြောခဲ့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ဆဲနေတာဖြစ်တယ်။ မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျနော်နာမည်နဲ့ အတိအကျပြာမယ်။ ဘုန်းကျော် ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုရိုင်းရလဲဆိုတာ။ RFA က ကိုဇော်မိုးကျော်၊ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဟောင်း ကိုပိန်၊ သြစတျေးလျက ABSDF ရဲဘော်ဟောင်း ကိုထူးကျော်၊ ကိုထူးချစ်တို့ ကျနော့်ရဲ့ မိဘတွေတောင်ပါတဲ့ ဆဲနည်းနဲ့ ပေါ်တင်ဆဲခဲ့ဘူးတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးက ကျနော့်လူရင်းတွေပဲ။ ကိုထူးချစ်ကတော့ ချစ်ဆဲလေးပေါ့။ ဆဲတာကို သူတို့ပဲ သင်ပေးခဲ့တယ်။ ရိုင်းအောင်သူတို့ပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါတောင် ကိုယ့်ရှေ့ မှာ မဆဲတဲ့လူတွေတစ်ပုံကြီးရှိသေးတယ်။ ဒီလူတွေက လူကြီးတွေပါ။ ခလေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ သတိထားပြီးနေကြပါ။ ဘုန်းကျော်ဆိုတဲ့လူက ဘယ်တော့မှ သူများကို အရင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ထားလိုက်ပါဗျားးးးးမြန်မာနီတီရှိတယ် အမိယုတ်တော့နုတ်သရမ်း အဖယုတ်တော့လက်သရမ်းတဲ့ အဖေကစစ်သား အမေကတောထဲကပအိုဝ်မ ဆိုတော့ ၀ရမ်းပြေးနဲ့ ဖာသယ် လကွယ်ညသန်းခေါင်းမှာ င်္သချိူင်ထဲက ဇရပ်မှာ ခွေးဇတ်ခင်းပြီး လေသလပ်တဲ့ သုပ်ကနေ လူဖြင့်လာတော့ ဒီလောက်တော့ရှိပါပေါ့းးးးးးသတ္တိကတော အတော်ရှိသဗျးးးးး နယ်စပ်မှာနေတုန်းက ဒီအသံတွေ မထွက်ပါလားးးး မင်းသူများကို အဖြင့်မရှိဘူးမဝေဖန်းနဲ့ မင်းလည်းစောက်ဖြင့်မရှိလို့ မွန်မအမျိုးတွေက သဘောမတူလို့ ခွဲကြတာပေါ့စောက်ရူး လေယဉ်လက်မှတ်တောင် AM PM မကြည့်တတ်တဲ့ကောင်
ဒီနေရာမှာတော့ဘုန်းကျော်ပြောတာတွေမှန်တာတွေပါတယ်၊ မခံမရပ်နှိုင်တွေဖြစ်နေတာက တော်တော်ကြီးဆိုးတယ်ဗျာ၊ ကျနော်ဘုန်းကျော်ကို သိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူပြောနေတာတွေက လက်တွေ့ကျကျ မှန်နေတယ် ၊အဲဒါကိုတော့လက္ခံသင့်ပါတယ်။
ဘုန်းကျော် မှန်တယ် မမှန်ဘူး အသာထား။ ဒီကောင် ဆဲထားတာကို ကြည့်ဦး။ အားလုံးသိမ်းကြုံးဆဲထားတယ်။
((လီးပဲ..ငါလိုးမသား မြန်မာတွေ။ ဗမာတွေ။ ဆက်ပြီး လုပ်ကြ။))
ကျူပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးသမားလဲမဟုတ်ဘူး။ အတိုက်အခံလဲ မဟုတ်ဘူး။ သိမ်းကြုံးဆဲတာတော့ လက်မခံဘူး။ သိပ်ဆဲချင်သပဆိုရင် နာမည်တပ်ပြီးဆဲ။ အောက်တန်းစားကောင်။
ကိုဘုန်းကျော် .. ရေးထားတာတွေက အမှန်တရားတွေ တော့ပါ ပါရဲ့... ဒါပေမဲ့ စကားလုံးတွေက ကြမ်းတမ်းလွန်းပါတယ်.. မိုက်ရိုင်းစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်..